Imisa Boqol oo Milyan ayay ku fadhiyaan safafka caawa iska hor tagaya ee Barcelona iyo Manchester City? – Gool FM
Imisa Boqol oo Milyan ayay ku fadhiyaan safafka caawa iska hor tagaya ee Barcelona iyo Manchester City?
Haaruun October 19, 2016
(Barcelona), 19 Okt 2016 –Kulanka caawa garoonka ‘Camp Nou’ ee Spain ku dhex maraya kooxaha Barcelona iyo Manchester City ee ka tirsan UEFA Champions League ayaa waxaa isaga hor imaanaya laba kooxood oo dhaqaale aad u fara badan ku kacaya.
Haddii aan eegno safafka hore ee labada naadi Barcelona iyo Man City ayaa marka la isku geeyo qiimahooda lacageed waxa ay u dhigmaan ama qiimo ahaan ku kacayaan 700 Milyan oo Giniga Istarliinka ah (783 Milyan oo Euros).
18 laacib ee safka hore ee Barcelona ayaa ku qiimeysan 323 Milyan oo Gini, halka Man City line up-keeda hore uu ku kacayo 425.35 Milyan oo Gini (475 Milyan oo Euros).
Mourinho; "Ma jiro qof aan la taaban karin oo mar walba boos joogto ah ka haysta safka Man United"
GOOGOOSKA: Paris Saint Germain vs Basel 3-0